विश्वको ध्यान खिच्दै चीन— ‘सन् ०५० सम्ममा ‘शक्तिशाली आधुनिक समाजवादी राष्ट्र बन्ने छ’
राष्ट्रपति सीको घोषणाले के दाखाउँछ ? आर्थिक र सैनिक शक्तितिर बढ्दै छ चीन
| 2017-10-18 Published
निर्माण सञ्चार, एजेन्सी । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनलाई २१ शताब्दीको मध्यसम्ममा ‘महान आधुनिक समाजवादी राष्ट्र’ बनाउने घोषणा गरेका छन् ।
राष्ट्रपति सीको घोषणालाई लिएर यतिबेला अमेरिका, बेलायत, युरोप र भारतभर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं नेसनल काँग्रेसले अत्यधिक चर्चा पाएबाटै राष्ट्रपति सीको घोषणाको कति दम रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
दुनियाँका सबै मूलधारका मिडिया र पत्रकारहरु चिनियाँ नेसनल काँग्रेसका गतिविधि विश्वभरै ब्रोडकास्ट गरिरहेका छन् ।
बेइजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको उक्त काँग्रेसमा बोल्दै राष्ट्रपति सीले चीनलाई थप शक्तिशाली बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।
सीपीसीले चीनलाई २१ औं शताब्दीको मध्यमा महान समाजवादी राष्ट्र बनाउने योजना दुई चरणको विकासको दोस्रो चरण हो ।
सन २०२० देखि २०५० सम्ममा राष्ट्रपतीको यो घोषणाले मूर्तरुप पाउनेछ । राष्ट्रपति सीले चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादको विकासका निम्ति रणनीतिक दृष्टिकोणको आह्वान समेत गरेका छन् ।
त्यसका केही आधार समेत उनले राखेका छन् ।
सन २०२० देखि २०३५ सम्म समाजवादी आधुनिकीकरणका लागि जग निर्माण गरिने छ भने बाँकी समयमा आधुनिक समाजवादी राष्ट्र नै घोषणा गरिनेछ ।
त्यसमा समुन्नत, बलियो, प्रजातान्त्रिक, सुन्दर चीन निर्माण हुनेछ ।
चीनले लिने यस दिशाले अबको विश्वको प्रजातन्त्रका लागि चिनिया मोडल अमेरिकी भन्दा पनि राम्रो भन्ने प्रतिस्पर्धा दुनियाँमा हुने विश्वभरका विश्लेषकहरुको आँकलन छ ।
उनीहरु भन्छन्, ‘चीनले यदि आफूले चाहे जस्तो समाजवादी नमूना अभ्यासमा सफल भयो भने बाँकी विश्व पश्चिमा पुँजीवादी लोकतन्त्रलाई भन्दा चिनियाँ मोडेलेको समाजवादी लोकतन्त्रको पक्षमा लामबद्ध हुने सम्भावना छ ।’
र, यसले पश्चिमा बल र शोाषणमा आधारित पुँजीवादी युगलाई साँच्चिकै चुनौती दिने र प्रजातन्त्रको नयाँ युगको सूत्रपात गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्रपति सीले सन २०५० सम्ममा राष्ट्रहरुको समुदायको एक गर्व गर्न लायक र सक्रिय सदस्य हुने बताएका छन् । चिनियाँ कंग्रेस प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने सीपीसीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक भेला हो ।
यसले नीति र नेतृत्व चयन गर्नेछ । यसलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र नभई चिनिया जनताहरुले समेत महाकुम्भका रुपमा लिने गर्छन् ।
चीनले आफ्ना नेता कसरी चयन गर्छ ?
प्रत्येक पाँच वर्षमा सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो महाधिवेशन गर्दा चीनतर्फ संसारको ध्यान खिचिएको हुन्छ।
यो भेलाले पार्टीको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने टुंगो लगाउँछ। उनीहरुले नै चीनका १ अर्ब ३० करोड जनताको नेतृत्व गर्छन्।
साथै संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको पनि।
बहालवाला पार्टी नेता एवम् राष्ट्रपति सी जिनपिङ्नै नेतृत्वमा रहने अनुमान गरिएको छ। तर सँगै अरु नेतृत्व तहमा फेरबदल हुने ठानिएको छ।
महाधिवेशनले के गर्छ ?
मध्य अक्टोबरमा देशभरबाट आएका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी ९सीपीसी० का प्रतिनिधिहरु बेइजिङस्थित ‘ग्रेट हल अफ द पिपल’मा भेला हुन्छन्।
‘ग्रेट हल अफ द पिपल’ मा २२ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि देशभरबाट भेला हुनेछन् पार्टीका २३ सय प्रतिनिधि छन् ।
तथापि २२८७ मात्रै उपस्थित हुनका लागि छानिएका छन्।
१३ जना ुअनुपयुक्त व्यवहारु देखाएको भन्दै भाग लिन अयोग्य ठहर गरिएका छन्। बन्द कोठाभित्र सीपीसीका प्रतिनिधिहरुले सबैभन्दा शक्तिशाली केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नेछन्। उक्त कमिटीमा २ सय जना सदस्य रहनेछन्।
त्यसले पोलिटब्युरो निर्वाचित गर्नेछ र त्यसबाट पोलिटब्युरो स्थायी कमिटी चयन हुनेछ। तिनीहरु नै चीनका वास्तविक निर्णयकर्ता निकाय हुन्।
यो वर्ष के अपेक्षा छ ?
पोलिटब्युरो स्थायी कमिटीको चयन महाधिवेशनबाट हुनेछ, १९औं महाधिवेशन मूलतस् दुईवटा कुराका लागि चाखपूर्वक हेरिनेछ । पहिलो, सीले एउटा लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन्।
त्यसबाट आगामी पाँच वर्षमा चीनले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने थाहा हुनेछ। दोस्रो, पोलिटब्युरो स्थायी कमिटीमा लगभग नयाँ अनुहार आउने ठानिएको छ।
पछिल्ला केही वर्ष पार्टीले निश्चित पदकाहरुका लागि अनौपचारिक अवधि र उमेर हद तोकिएको छ।
६८ वर्षको उमेर हदका कारण धेरै पोलिटब्युरो स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले पद छाड्ने ठानिएको छ।
सी जिनपिङ्का लागि के अर्थ ?
यो महाधिवेशनले राष्ट्रपति सीको शक्ति थप मजबुत बनाउने ठानिएको छ । सन् २०१२ मा सत्तामा आएयता उनलाई चीनका ‘वास्तविक’ नेताका रुपमा हेरिएको छ । त्यसको अर्थ उनलाई माओ जेदोङ र देङ स्याओपिङ् जस्ता चीनका ठूला नेताहरुसँग तुलना गरिनु हो ।
नेतृत्व तहमा उनका सहयोगीहरु आउने सम्भावना छ। साथै ‘सी जिनपिङ विचार’का रुपमा चिनिने उनका नीतिहरु पार्टी दस्तावेजमा राखिने पनि हुनसक्छ।
त्यसले उनलाई चिनियाँ इतिहासमा माओकै तहमा पुर्याउनेछ। परम्परागत रुपमा राष्ट्रपतिको दुई कार्यकाल हुने भएपनि यसपालि सीले त्यसलाई विस्तार गर्नसक्ने समेत अनुमान गरेका छन्।
बिबिसी र सिन्ह्वाको सहयोगमा
बुधबार, १ असोज २०७४